China Semi-auto Ultrasonic Tube Filler uye Sealer HX-006 fekitari uye bhizimisi | HX Muchina
Otomatiki Ultrasonic Tube F ...
Double chubhu yekuzadza uye gungwa ...
Semi-repair Ultrasonic Tube F ...
Yehupfumi Ultrasonic Tube Fi ...
Semi-auto Ultrasonic Tube Yakazadza Uye Sealer HX-006
Magetsi AC220V / 110V 1PH 50 / 60HZ
Kuzadza Range A: 6-60ml B: 10-120ml
(inogona kusarudza zvichienderana nevhoriyamu yevatengi)
Kuzadza Zvakarurama ± 1%
Kukwanisa 18-30pcs / min
Kuiswa chisimbiso Dia. 13-50mm
Tube Kureba 50-200mm
Dzvinyiriro Yemhepo 0.6MPa
Kushandiswa Kwemhepo 0.35m3/ min
Divi L1300 * W900 * 1550mm
* Nemaoko chubhu kudyisa, otomatiki kunyoresa mucherechedzo kuratidza, kuzadza, kuisa chisimbiso nekodhi, kupera kudimburira, chubhu kunze kwekupa.
* Inotora Ultrasonic yekuisa chisimba tekinoroji, hapana chikonzero chekudziya-kumusoro nguva, yakadzikama uye yakashongedzwa chisimbiso, hapana kukanganisa, uye yakaderera yekuramba mwero isingasviki 1%.
* Yazvimiririra R&D yedhijitari ultrasonic otomatiki yekutevera jenareta, hapana chikonzero chekuchinja manhamba, nesimba remagetsi muripo basa, kudzivirira kudzikiswa kwesimba mushure mekushandisa kwenguva yakareba. Inogona zvakasununguka kugadzirisa simba rakavakirwa pombi yezvinhu uye saizi, kugadzikana uye kushoma chiyero chemhosva, kuwedzera hupenyu hwehupenyu kupfuura hwakajairwa bhokisi remagetsi.
* PLC ine touch screen control system ine alarm system inogona kuona zvakananga ruzivo rwe alarm pane yekubata skrini, inogona kutsvaga dambudziko, uye kugadzirisa ipapo ipapo.
* Chiteshi chega chega chaigona kudzorwa zvakazvimiririra mukubata skrini, hushamwari hwekugadzirisa pakati pemahubhu akasiyana Vashandi vaigona kushandisa chubhu imwechete kungoisa zvimiro zvese, vachichengetedza nguva yakawanda uye zvinhu.
* Cam indexing system inogona kumira chaizvo kune gumi anoshanda zviteshi.
* Yakagadzirwa ne304 simbi isina simbi, asidhi uye alkali kuramba, ngura kuramba.
* Hapana chubhu, hapana kuzadza, hapana chubhu, hapana chisimbiso basa, kudzikisira iyo chubhu zvinhu, muchina uye muforoma kurasikirwa.
* Inotora Anti-kudonhedza yekuzadza kamwene.
Inoshandiswa zvakanyanya chikafu, mishonga, zvigadzirwa, makemikari uye mamwe mapurasitiki, PE, aluminium laminated chubhu yekuzadza nekuisa chisimbiso.
1. Auto-Zadza pombi
2. Double jekete hopper nekupisa uye inomutsa basa
3. 316L Stainless simbi yekuonana zvikamu
4. Mhepo inovhuvhuta dhizaini yeakakwira viscous uye inonamira zvinhu
5. Furemu nemusuwo wekuchengetedza inogona alarm uye kumira
Pashure: Zvehupfumi Ultrasonic Tube Kuzadza Uye Sealer HX-002
Zvadaro: Kaviri chubhu yekuzadza uye yekuisa chisimbiso muchina HX-009S
Otomatiki Tube Filler Uye Sealer
Plastiki Tube Filler Uye Sealer
Tube Filler Uye Sealer